SMPTE ST 2110 နှင့် JT-NM TR-1001-1 နှစ်ခုလုံးအတွက်အောင်မြင်သော JT-NM စမ်းသပ်ပြီးရလဒ်များဖြင့်ပွင့်လင်းသောစံသတ်မှတ်ချက်များ IP ဖြင့် Grass Valley ဘိလပ်မြေစက်မှုလုပ်ငန်းမှ ဦး ဆောင်မှု | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » SMPTE ST 2110 နှင့် JT-မိုင် TR-1001-1 နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အောင်မြင်သော JT-မိုင်စမ်းသပ်ခံရရလဒ်များနှင့်အတူပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းအိုင်ပီအတွက်မြက်ချိုင့်ဘိလပ်မြေစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များခေါင်းဆောင်မှု
Montreal - 13: 00 CET စက်တင်ဘာလ 9, 2019 - မြက်ချိုင့် (တဲ 9.A01) အများအတွက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေး၏အောင်မြင်သောစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများ-based အိုင်ပီတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့ဆောင်အဖြစ်က၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည် SMPTE IP ကိုကျော်မီဒီယာများ၏အနှစ်သာရ-based သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် ST 2110 စံ။ မကြာသေးမီကစဉ်အတွင်း မီဒီယာရဲ့ network ပေါ်မှာပူးတွဲ Task Force JT-မိုင် SMPTE ဥရောပအသံလွှင့်ယူနီယံ (EBU) နှင့် Institut သားမွေး Rundfunktechnik (IRT) ကအုပ်ချုပ်စမ်းသပ်မှုတွေ ST 2110 ပတ်ပတ်လည်, မြက်ချိုင့်နှင့်အတူအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါနှင့် alignment ကိုသရုပ်ပြ SMPTE ယင်း၏ဖြတ်ပြီး ST2110 စံချိန်စံညွှန်းများ XIP-3901-UDC-အိုင်ပီ ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ Processor, IPVU စောင့်ကြည့်တံခါးပေါက်, K-Frame က X ကိုဗီဒီယိုကထုတ်လုပ်မှုစင်တာနှင့် Kaleido အိုင်ပီ သူတို့လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နဲ့ operate နှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်စွာကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းသေချာသည်မြင်ကွင်းစုံဖြေရှင်းနည်းများ။
အခြားမည်သည့်ရောင်းချသူထက်ပိုပြီးများထားရှိနဲ့အတူပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများ-based IP ကိုတစ်ဦးလောလောဆယျတော့အဖြစ်၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်၏အောင်မြင်သောစမ်းသပ်ခြင်းအိုင်ပီဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အကူးအပြောင်းကားမောင်းအတွက်မြက်ချိုင့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအလေးပေး။ အဆိုပါ JT-မိုင် SMPTE ST2110 အစီအစဉ်ကိုရောင်းချသူပစ္စည်းကိရိယာများ၏သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းများကိုညီဘယ်လိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထား SMPTE'' s ကို ST2110 နှင့် ST2059 စံချိန်စံညွှန်းများ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိရိယာများအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အရည်အချင်းများဖြစ်စဉ်များလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သည့်အခါဖောက်သည်များနှင့်အဆုံးသည်အသုံးပြုသူများ သာ. ကြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးခြင်း။
သူ Mike Cronk, ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, core ကိုနည်းပညာ, မြက်ချိုင့် commented: "ဖန်ဖို့ဖန်ကနေပွင့်လင်း IP ကိုစွမ်းရည်ပို့ဆောင်အတွက်ခေါင်းဆောင်နှင့်အမျှအောင်မြင်စွာနှစ်ဦးစလုံးအတှကျ JT-မိုင်စမ်းသပ်ခံရအစီအစဉ်ဖြတ်သန်း SMPTE ST 2110 နှင့် JT-မိုင် TR-1001-1 သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုထံမှဖြေရှင်းချက်ကိုဝယ်ယူရန်တဲ့အခါမှာသူတို့ကစက်မှုလုပ်ငန်း-သဘောတူညီခဲ့ပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အရည်ရွယ်ထားလမ်းပြမြေပုံနှင့်အတူခိုင်မာသော IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါတသမတ်တည်းလာပြီဖြစ်ကြောင်းယင်းကဆက်ပြောသည်ယုံကြည်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပေးသည် - အရာ, တစ်ဦးကိုစတင်တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တဦးအဖြစ်, ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်မောင်းဖို့ကျူးလွန်နေကြသည်။ ထိုသို့အောင်မြင်သောမီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သော, ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့အရွယ်မှာနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် Workflows ပေးပို့သူတို့၏ IP ကိုများထားရှိချောမွေ့နှင့်ရိုးရှင်းဖို့ထုတ်လွှင့်အားဖွင့်အတွက်အဓိကဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်မြက်ချိုင့်သစ်ကို JT-မိုင် TR-1001-1 သတ်မှတ်ချက်အပေါ်အလွန်အီရန်ဖြစ်ပါသည် ယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်။ ကျနော်တို့မြက်ချိုင့်ထုတ်ကုန် TR-1001-1 သတ်မှတ်ချက်အဘို့ဤနှစ်စင်း JT-မိုင်စမ်းသပ်ခံရဖြစ်ရပ်အတွက်ဒါကောင်းစွာဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်အများပြည်သူရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်အားလုံးအားပေးကြောင်းဂုဏ်ယူပါ။ "
စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်၏ရလဒ်များ IBC 2019 စဉ်အတွင်း IP ကိုဟန်ပြမှာရရှိနိုင်မယ့်ဆက်ကပ်အပ်နှံ JT-မိုင်စမ်းသပ်ခံရ Catalog အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည် - အောင်မြင်သောရောင်းချသူလည်း၎င်းတို့၏တဲပေါ်မှ JT-မိုင်စမ်းသပ်ခံရတံဆိပ်ဖော်ပြရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ JT-မိုင်စမ်းသပ်ခံရအစီအစဉ်နှင့်ယင်း၏စမ်းသပ်မှုရလဒ်ပေါ်မှာအသေးစိတ်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: jt-nm.org/jt-nm_tested.
CES2017 စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-09
ယခင်: အနာဂတျအတှကျ PMC စတင်အသံ - အသံကျောင်းဆင်းများအတွက်တစ်ဦးကနယူးပညာသင်ဆု
နောက်တစ်ခု: MOG IBC 2019 မှာသစ်ကို VIZZI ရဲ့ features တွေကိုတင်ဆက်